Cycloastragenol ntụ ntụ (78574-94-4) - Shangke Chemical
Cycloastragenol ntụ ntụ (78574-94-4)
Cycloastragenol bụ ihe eji eme ihe na - eme ka ihe ndi ozo dị na ahia.
Ihe nkiri cycloastragenol ntụ ntụ (78574-94-4)
Cycloastragenol powder Smmezi
Product Name Cycloastragenol ntụ ntụ
molekụla Fnhazi C30H50O5
molekụla Wasatọ 490.7 g / mol
Nkịtị Monoisotopic 490.365825 g / mol
Sume DMSO: 10 mg / mL, doro anya
Antinye Cycloastragenol bụ onye nwere ikike telomerase. Ọzọkwa, enwere ike ijikọ ya na mgbochi ịka nká na ọgwụ China.
Cycloastragenol bụ ihe eji eme ihe na - eme ka ihe ndi ozo dị na ahia. A na-ejikwa ya na okomoko akpukpo ahiri okpokoro na usoro ịchọ mma. Ezubere Cycloastragenol nke mbụ na nri nri na USA na 2007 n'okpuru aha TA-65, ọ bụ ya mere TA 65 ma ọ bụ TA65 ka bụ aha kachasị ewu ewu maka cycloastragenol.
Gịnị bụ Cycloastragenol?
Cycloastragenol bụ molekul sitere na ogwu Astragalus membranaceus. Ejirila ahịhịa Astragalus na ọgwụ China kemgbe ọtụtụ narị afọ. Ndị China kwuru na Astragalus nwere ike ịgbatị ndụ, ọ jikwa ya iji gwọọ ike ọgwụgwụ, nfụkasị ahụ, oyi, ọrịa obi na ọrịa shuga.
Cycloastragenol bụ otu n'ime ihe ndị na-arụ ọrụ na Astragalus. Cycloastragenol nwere usoro kemịkalụ yiri nke ihe ana-akpọ Astragaloside IV, mana ọ dị obere ma nwekwawanye ụba nke bioavas, nke na-enyere aka ị nweta obere ọgwụ. Ejirilarị ya dịka immunostimulant n'ihi ike ya ịba ụba pro protineration nke T lymphocyte. Agbanyeghị, ọ bụ akụrụngwa ya na - emegide ịka nká bụ nke na-abawanye mmasị na mpaghara sayensị.
Cycloastragenol na-akpali mmezi nke mbibi DNA site na ime ka telomerase, enzyme nucleoprotein nke na-ebute njikọ na uto nke DNA telomeric. A na-eji Telomeres mee ihe ndị chọrọ irighiri ihe, a na-ahụkwa ya na ntupọ chromosom. Machekwa nkwụsi ike ha na-eme ka mkpụrụ ndụ zere mmepụtaghachi mkpụrụ ndụ yana mmụba na-enweghị ngwụcha karịa 'njedebe Hayflick'. Telomeres dị mkpụmkpụ na usoro nke sel nke ọ bụla, ma ọ bụ mgbe enwere nrụgide oxidative. Ruo ugbu a, nke a bụ usoro a na-apụghị izere ezere nke ịka nká.
Usoro nke oru Cycloastragenol
Otutu ihe omumu egosiwo na Nchikota oria nke telomeres na nmekorita na otutu oria na aru oria (oria obi, oria, wdg) ma buru kwa n’iru na onwu n’iru ndi n’ile. Telomeres dị mkpụmkpụ na usoro nke sel nke ọ bụla, ma ọ bụ mgbe enwere nrụgide oxidative. Ruo ugbu a, nke a bụ usoro a na-apụghị izere ezere nke ịka nká.
Telomerase bụ enzyme nucleoprotein nke na-egbochi njikọ na uto nke telomeric DNA ma na-akpali mmezi nke mbibi DNA.
Cycloastragenol na - arụ ọrụ ma na - akpali enzyme a, si otú a na - egbochi mbelata telomere ma na - amụba ọnụọgụ ha. N'ụzọ dị otú a, ọ na-enye ohere ịgbatị telomeres na n'ihi nke a, na-agbatị ndụ ndụ sel.
N'ihi ịdị arọ ya dị ala, Cycloastragenol na-agafe mgbidi ngwa ngwa. Nleta kachasị mma na-enye ohere dị elu, ọbụlagodi na ọnụọgụ dị ala. Ntinyechi ubochi ma obu ya onwe ya, ma obu ya na ya ma obu ya na ya emeju, astragaloside IV, ga - enyere aka igbochi ịka nkenke ma gbasaa ndu ogologo ndu.
Astragalus membranaceus bụ otu n’ime mkpuru osisi dị mkpa na akụkọ ọdịnala Ọgwụ ọdịnala dịka ọgwụgwọ ọdịmma iji gwọ ike ọgwụgwụ, ọrịa, ọnya, kansa, ahụ ọkụ, ọnya post, ogologo ndụ wdg Cycloastragenol bụ molekul sitere na ogwu Astragalus membranaceus. Ma, uru isi nke cycloastragenol ntụ ntụ dị ka ihe mgbochi ịka nká na mmetụta nkwado mgbochi.
Cycloastragenol na nkwado mgbochi
Enwere ike iji Cycloastragenol chekwaa usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ, antibacterial, na antiinflammatory, maka ịhapụ oyi nkịtị na usoro iku ume elu. Ejiri ya mee ihe dị ka onye na - eme ka ihe ọ immuneụ immuneụ na - alụso ọrịa ọgụ n'ihi ike ịbawanye ụba nke ọgwụ lymphocyte. Ka osi di, ihe ndi sayensi nwere mmasi kariri odi nma nke nguzogide ndi agadi. Cycloastragenol na-agba DNA ume ka ọ rụzie mmebi site na ibido telomerase ma kwe ka ihe nchebe nuklia jikọta njikọta na uto nke telomere DNA.
Cycloastragenol na mgbochi ịka nká
Mgbochi ịka nká bụ uru pụtara ìhè nke cycloastragenol. Ọ bụghị nanị cycloastragenol na-egbu oge ịka nká, kama nke ahụ, ọ nwekwuru ihe mgbochi, ịmụba nsí mkpụrụ ndụ, ichebe akwara obi, nke sitere na mmiri mmiri astragaloside (Astragaloside Ⅳ).
Uru Cycloastragenol ndị ọzọ
cycloastragenol ntụ ntụ nwere mmetụta n'ịbelata nrụgide na ichebe ahụ pụọ na nrụgide dịgasị iche iche, gụnyere nrụgide anụ ahụ, nke uche, ma ọ bụ nke mmetụta uche;
cycloastragenol ntụ ntụ nwere antioxidants, nke na-echebe mkpụrụ ndụ megide mmebi nke radicals n'efu na-akpata;
cycloastragenol ntụ ntụ nwere mmetụta na wedata ọbara mgbali elu, na-agwọ ọrịa shuga ma na-echebe umeji.
Cycloastragenol ntụ ntụ mmetụta
Ruo ugbu a, enweghị akụkọ ma ọ bụ nyocha nyocha nke mmetụta ọjọọ ma ọ bụ contraindication na-ewere mgbakwunye cycloastragenol.
Cycloastragenol mgbakwunye usoro onunu ogwu
Cycloastragenol bụ ihe ọhụrụ na ọ bụghị ọtụtụ ụdị nkwado dị na ahịa, na enweghị ọgwụ akwadoro ka ọ dị. Dabere na ahụmịhe anyị, usoro ọgwụgwọ dịgasị iche iche nwere ebumnuche dịgasị iche, afọ. N'ezie cycloastragenol dị ike karịa Astragaloside IV nke ọgwụ a tụrụ aro bụ 50mg kwa ụbọchị. Ezie maka cycloastragenol, ịwepu site na 10mg ruo 50mg dị mma. Ọ dị mkpa ị ga-ewere ihe karịa ndị okenye nọ n'etiti. Fọdụ na-atụ aro ịmalite site na 5mg kwa ụbọchị, wee tinye nwayọọ nwayọọ. Ebe ọ bụ na cycloastragenol bụ ihe wepụtara n'okike, ọ nwere ike iwe oge iji hụ nsonaazụ ahụ, ihe dị ka ọnwa isii.
Somefọdụ ewerewo Cycloastragenol dị ka ọrụ ebube nke ịka nká. Ihe omumu mbu bidoro na-ekwe nkwa, n’igosi na o nwere ikike iwelite telomere ogologo, agbanyeghi enwere nchoputa adighi nyocha ihe omumu. Na mgbakwunye, enwere nchegbu na ị takingụ Cycloastragenol nwere ike ịbawanye ihe ize ndụ nke ụfọdụ ọrịa kansa. Ka osi di, ihe omumu nyocha emebeghi ike inwu oria cancer nke jikọtara ya na iji Cycloastragenol.
Cycloastragenol dị ka ogige na - ekwe nkwa ịka nká. Ọ bụ ezie na egosighi na ọ na-abawanye ndụ, mana egosiri ya iji belata afọ dị iche iche metụtara ndụ. Na mgbakwunye, egosiri ya iji belata ihe ịrịba ama nke ịka nká dị ka ahịrị dị mma na wrinkles. O nwekwara ike belata ihe ize ndụ nke ọrịa degenerative dịka Alzheimer, Parkinson's, retinopathies, na cataracts.
Cycloastragenol ntụ ntụ eji na ngwa
A na-eji Cycloastragenol maka ọgwụgwọ, njikwa, mgbochi, & ndozi nke ọrịa, ọnọdụ na akara ndị a:
Homeostasis ọgba aghara
A nwekwara ike iji Cycloastragenol maka ebumnuche edepụtara ebe a.
Ejirila ntụ ọka cycloastragenol n'okpuru ala:
Ejiri ya mee ihe n'ubi nri, a na-ejikarị ya agwakọta ihe oriri;
Ejiri ya na ngalaba ngwaahịa ahụike, mmụpụta a na-enyere ahụ mmadụ aka;
Ejiri ya na mpaghara ịchọ mma, dị ka ụdị akụrụngwa, ọ nwere ike ịgwakọta ihe ịchọ mma sitere n'okike.
Ihe mgbochi nke ịka nkpu nke cycloastragenol nke biotransformation.Chen C, Ni Y, Jiang B, Yan S, Xu B, Fan B, Huang H, Chen G.Nat Prod Res. 2019 Sep 9: 1-6. doi: 1080 / 14786419.2019.1662011.
Cycloastragenol: Nwa akwukwo ndi nwere ihe omuma nke oria na-adighi agha.Yu Y et al. Thechụpụ Med. (2018) Nchịkwa ịka nká nke cycloastragenol nke biotransformation mepụtara. Chen C, Ni Y, Jiang B, Yan S, Xu B, Fan B, Huang H, Chen G. Nat Prod Res. 2019 Sep 9: 1-6. doi: 10.1080 / 14786419.2019.1662011
Cycloastragenol nwere ike igbachi mmekpa ahụ STAT3 STAT2019 ma kwalite paclitaxel-indurated apoptosis na mkpụrụ ndụ kansa mmadụ.Hwang ST, Kim C, Lee JH, Chinnathambi A, Alharbi SA, Shair OHM, Sethi G, Ahn KS. XNUMX Jun
Astragaloside VI na cycloastragenol-6-O-beta-D-glucoside na-akwalite ọgwụgwọ ọnya na vitro na vivo.Lee SY et al. Phytomedicine. (2018)
Nwunye NSI-189 Phosphate (1270138-41-4)